အဆီကျဗိုက်ချပ်ဆေး.. အဲ…နည်း..။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » အဆီကျဗိုက်ချပ်ဆေး.. အဲ…နည်း..။
Posted by kai on Jun 9, 2012 in Health & Fitness, Sports & Recreation | 34 comments
အိပ်ထမတင်က ဗိုက်ချပ်တယ်ထင်သူများအတွက်.. သတင်းမကောင်းပါ။
အိပ်ထမတင်အကြိမ် ၂သိန်းခွဲလုပ်မှ ဗိုက်အဆီ ၁ပေါင်ကျသတဲ့လေ..။ အမျှ..အမျှ..
ဆိုတော့. ဗိုက်ကျချင်.အောက်က နည်း၃နည်း.. အတိုင်းလုပ်ပါတဲ့..
Step 2: De-Stress ( Stress တွေလျှော့ချ)
Step 3: Eat Right ( မှန်မှန်ကန်ကန်စား ..ရေသောက်)
သူကြီး ရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းက လက်မောင်းကြီးတွေပါ ကြီးလာမဲ့ ပုံဘဲ။
အဆင့် (၂) နဲ့ (၃) တော့ လုပ်ပါမယ်။
ရွာသူ/သား များ ကို လှစေချင်သော စေတနာဖြင့် နည်းလမ်းများ မျှဝေနေသော သူကြီးမင်း ရဲ့ ဗိုက် ကိုလဲ မြင်ကြည့်ချင်ပါ၏။ အဟိ။
သူကြီးရယ် ကျွန်တော် အဆီကျချင်တာကတော့ အလွန်ပါပဲ။ ခုနေများ မိန်းမယူမလား ဗိုက်ချပ်ချင်သလား ဆိုပြီူး ကျွန်တော် ကို ဦးမာဃ ကြွလာပြီး မေးရင်… ဗိုက်ချပ်ချင်တယ်ပြောမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ မလုပ်ရပဲနဲ ရတဲ့နည်း ရှိဘုးလားဟင်။
အကျိုးလည်းရှိ.. ကိုယ်လည်း ဗိုက်ပြုတ်သွားအောင်.. ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့.. အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပါလား
ယုံဘူး ။ တစ်ကယ်တာ ဦးမာဃ မေးလာရင် .. ဟီးဟီး မှားပြောမိတာလို့ ပြောမှာ မဟုတ်လား..
Stress ကတော့ စကတည်းက သိပ်မရှိပါဘူး ။
သက်သာမယ့် ဟာပဲစိတ်ဝင်စားတယ် ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၊ ရေ နှင့် High-protein foods ။
ပြည့်စုံသွားအောင် High-protein foods ဆိုတာကို ၊
အိပ် ထ မ တင် မလုပ်နိုင်တာနဲ့။
အင်းးးး ဒိုက်ထိုး လုပ်နိုင်လား ဆိုတော့လည်း
တစ်နေ့ ကို ဒိုက်အကြိမ်(၅၀)ထိုးရတယ်..
အခြားသူတယောက်ကိုခြေဖ၀ါးကန့် လန့် ထားပြီးတက်နင်းခိုင်းပါတယ်..
ဒိုက်ထိုးတာကိုမပေါ့ဆဘို့ နဲ့ အနေထားမှန်အောင်မထိုးရင်ခါးရိုးအဆစ်လွှဲသွားတတ်တယ်
အိပ်ထမတင်အကြိမ် ၂သိန်းခွဲလုပ်မှ ဗိုက်အဆီ ၁ပေါင်ကျသတဲ့လေ..။
၂သိန်းခွဲကို လုပ်ဖို့ “ရက်” ဘယ်လောက်အချိန်အတွင်းလို့များညွန်းပါသလဲ?
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်ဗိုက်အဆီက ၁ ပေါင်လောက်ဘဲရှိတာမို့ သေချာရင်
တရက် ၁၀၀၀ လုပ်ရင်တောင် ၂၅၀ ရက်ဆိုတော့ တော်တော်ကြာမှာတော့အမှန်။
အိပ်ထမတင်ကတော့ … လုံးဝကို မလုပ်တော့ပါဘူး …. ။ တခြားနည်းပဲ သုံးတော့မယ် … ။
အိပ်ထမတင် အလုပ်ကောင်းလို့ …. ကျွန်မဇက်ခိုင်သွားတာ … တပတ်နှစ်ပတ်လောက် အတော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ် … လည်ပင်းတောင် လှည့်လို့မရတဲ့အထိဖြစ်ဖူးတယ် …. ။
အခုတော့ .. ဗိုက်ပိန်အောင် ခါးလှည့်ကွင်းနဲ့ လုပ်နေပေမယ့် … ကွင်းက ဗိုက်နားမလည်ပဲ ခါးအပေါ်ဘက်မှာ လည်နေတာကြောင့် …. အဲ့နားက အဆီတွေကျပြီး ချပ်သွားပေမယ့် … ဗိုက်နေရာကတော့ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပဲ … ။ ဆေးတွေဝါးတွေကလည်း မသောက်ချင်တော့ …. ဒီဗိုက်တလုံးနဲ့ စိတ်ညစ်ရပါပြီ …. အရင်က မဆင်ခြင်ခဲ့မိတာတွေပေါ့ …. ။ အခုမှ အစားထိန်းလည်း … ဗိုက်ကထိန်းမရတော့ဘူး …
ကျွန်တော်ကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းအလှမ်းဝေးလို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်တော့ လောလောဆယ် ATOCOR (10mg) နဲ့ ZYTRIM (120mg) သောက်နေရပါတယ်..သူလည်း XENICAL တို့လိုပဲ တစ်နေ့တာစားလိုက်တဲ့ အဆီကိုပဲ အူနံရံကမစုပ်အောင်တော့ ကူညီပေးပါတယ်…ရွာသူ/ရွာသားများလည်း အထောက်အကူဖြစ်မလားဆိုပြီး အကြံပေးကြည့်တာပါ….
သဂျီးကလည်း ယင်းဂလိပ်လိုကြီးဆိုတော့ အဆီမကျခင်၊ ဦးနှောက်ကျသွားနိုင်တယ်။
ဒီရက်ပိုင်း အစာလျော့လိုက်တော့ … လူက နည်းနည်းပိန်သွားပေမယ့် … ဗိုက်က လိုက်မပိန်လို့ … စိတ်ညစ်နေတာ … ဗိုက်ချပ်နည်းဆိုလို့ … အရမ်းပျော်ပြီး …. အပြေးလွှားလာကြည့်တာ … အဟီး ။
ဗိုက်ချပ်သွားတာနဲ့အတူ … လက်ပျဉ်ကျယ်လာမှာတော့ အသေချာပဲ ။
” လူက နည်းနည်းပိန်သွားပေမယ့် … ဗိုက်က လိုက်မပိန်လို့ ”
အဲဒါက ပိုဆိုးတယ် ။
ma etone….ဂျာနယ်တခုထဲမှာတွေ့တဲ့နည်းလေး…လွယ်လို့လုပ်ကြည့်တာသိသာတယ်. သံပုရာသီးညှစ်ထားတာ 1.teaspoon၊ အုန်းဆီ ၅စက်၊ နောက်မိဂသီ or ရှမ်းရိုးမ တခါလိမ်းစာ ရောပြီး ဗိုက်ပြင်အပေါ်ကနေ ချက်အထိလိမ်းချရတယ်…လိမ်းကြည့်လိုက် …၅ရက်လောက်နဲ့သိသာတယ်.
သဂျီးရယ် ရက်စက်ပါ့။ ၀မ်းသာအားရပြေးလာကြည့်ပါတယ်။ လူဇိုး။ မိုးလင်းကတဲကသတင်းတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေတာ သဂျီးပိုစ့်ကြောင့် ကော်မင့်တွေကြည့်ပြီး ရီလိုက်ရတာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးကျေးပါ။ နောက် ကိုအဲ လိုတော့နောက်နဲ့နော်။
အဆီ လှီးထုတ်တာကိုကော ဘယ်လိုသဘောရလဲ ။
ပန်းလှိုင်က အသိ အီတလီ ဆရာဝန်ကြီးကတော့ ၊
လှီးထုတ်တာကို Recommend ပေးတယ် ။
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကလည်း လုပ်ဖို့ အဖေါ်လာစပ်နေတယ် ။
အဲဒီအဆီတွေကို.. စားအုံးဆီထဲထည့်ရောင်းရင်.. တွက်ခြေကိုက်မလား.. ?
အဲ- မှားလို့ နေတိုး နားသွားရဦးမယ်။
ကျုပ်ကတော့ ပူလွန်းလို့ကိုယ့်ချက်ကိုယ်တောင် ငုံ့ ကြည့်လို့ မမြင်ရဘူး..
ချက်ကိုလွမ်းရင် မှန်ထောင်ပြီး ကြည့်ရတယ်..
အောင်မယ်လေး ဒေါ်စိန်ဗိုက်ရယ် ညီးကတော့အေ ကျားကိုးစီးစားမကုန်ကိုးအေ့။ ပြောအားရှိ တာ ပေါ့အေ။
ကျုပ်ဗိုက်ကတော့ အနေတော်လောက်ဘဲ လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတ်မှတ်မိတာကလား ။
ဟုတ်တယ်လေ ၊ မိန်းမ လက်ကမြင်းစရာ ၊ ဗိုက်ပူပူလေးပေါ့ဗျာ..ဟီဟိ ။ ဗိုက်သိပ်မပူသေးသော အိမ်ထောင်ရှင်များ နဲ့ ရည်းစားရှိသူများ ၊ ဗိုက်လေးနဲနဲပူတာ ဟာ ကိုယ့်ချစ်သူ လက်ကမြင်းစရာပါ ။
အင်းမဒမ်ပေရဲ့ လက်ဝှေ့ကျင့်စရာ သဲအိပ်ကြီးပေါ့လေ။ ကောင်းလေစွကောင်းလေစွ။
ကျုပ်ဗိုက်လည်း အတော်ထွက်လာပြီ ..
နောက်ဘက်ကို ပြောပါဒယ် …
ဒါနဲ့ သဂျီး အဆီကျဗိုက်ချပ်လည်း ပြီးရင် ..
ဗိုက်ထွက်နည်းလည်း လုပ်အုန်း ..
ဒီမှာ ငဖောင်ရိုးတောင် အရှုံးပေးရဒဲ့ရုပ် ဖစ်နေလို့ ..
ကိုယ်တို့ ကတော.ဗိုက်ချပ်ပြီးသားဆိုတော့…အခု မကျင့်သေးဘူး။
ဗိုက် ပူလာတဲ့အခါ….ကျင့်ရဖိ်ု့ တော့..ကော်ပီဆွဲပြီး.သိမ်းလိုက်တယ်။
သူကြီးရော..အဲဒီ လေ့ကျင့်ခန်းကို နေ့တိုင်းကျင့်နေတာလား..ဟင်။
မသ်ိလို့ မေးတာနော်။ အဟိ ။
Gymသွားကစားတာ ၁လလောက်ရှိတော့ ဗိုက်က၁လက်မလောက်တော့ ပြုတ်သွားရှာတယ်
မကစားတော့ဘဲ နားလိုက်တာ ၁ပတ်လောက်ရှိတော့ ၂လက်မ မကပြန်တက်သွားတယ်
ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကတော့ ၀ရင် ဗိုက်ကအရင်စ ၀ သတဲ့
သတ်ချင်သတ်ပစ်လိုက်။ လုပ်ဘူး။၀မှလှတယ်။ ပုမှနုတယ်။မိန်းမအလှ ဗိုက်ရှိမှတဲ့။
သေရင် ဒီခန္ဓာကြီး ပျောက်သွားမှာဘာ
ဒီတော့ မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုတွေ၊အရွတ်တွေ အစရှိသဖြင့် ပျောက်ဖို့ရာ ဖုန်းလေးတချက်ဆက်ယုံဘာဘဲ
ဆိုတော့ ခဏလောက် သေချင်ယောင်ဆောင်လိုက် ပြီးရင် နာရေးကူညီမှုကို ဖုန်းဆက်လိုက် ချက်ချင်း သဂြိုလ်ခိုင်းလိုက်ပါ
မလိုအပ်တဲ့ ခန္ဓာကြီး ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်….
ဒီနေရာမှာ ပြောစရာရှိတာက တကယ်သေသွားမှာပေါ့ မပူပါနဲ့ သဂြိုလ်စက်တွေက ချက်ချင်း ပြာဖြစ်အောင် မသဂြိုလ်ပါဘူး ရှေ့ကသွင်း အခေါင်းမီးလောင်ပြီး မီးခိုးထွက်တာနဲ့ နောက်က ချက်ချင်း ဆွဲထုတ် ပြီးမှ လိုချင်တာလေး ချွတ်ယူ ပေါင်းပီး ကျင်းထဲ စုပုံမြှပ်တာမို့ ပြန်ထလာရင် အဆီပိုတွေ မရှိလောက်တော့ပါဘူး
တလုပ်ဆေးဆြာ ကြုပ်ဝတောင်တော့ တပတ်တခါ လုပ်မယ် ပြောဒယ်
အသေးစိပ် သိချင်ရင် သူ့ဆီစုံစမ်းဘာ…..
MTA ကြောင်းသါးတစ်ဦး(မာစတာအော့ဖ် သုဘရာဇာ အဒမင်ဆဒွေးရှင်း ဘွဲ့ယူနေသူ)
သတင်းခေါင်းစဉ်တစ်ခု ဖြတ်ကနဲ တွေ့လိုက်မိတာ “ဝတဲ့ လူ” ဆို ပိုပြီး မီးလောင်လွယ်တယ် ဆိုလား။
သဂြိုလ်စက်တွေက ချက်ချင်း ပြာဖြစ်အောင် မသဂြိုလ်ပါဘူး ရှေ့ကသွင်း အခေါင်းမီးလောင်ပြီး မီးခိုးထွက်တာနဲ့ နောက်က ချက်ချင်း ဆွဲထုတ် ပြီးမှ လိုချင်တာလေး ချွတ်ယူ ပေါင်းပီး ကျင်းထဲ စုပုံမြှပ်တာမို့
မဟုတ်လောက်ပါဘူး သူကြီးရယ် ..
လူအကုန်လုံးတော့ မသိဘူး ။ သဂြိုလ်ထဲမီးစက်အတွင်ပိုင်းကို လူတစ်ယောက်ဝင်ခွင့်ပြုပြီး စောင့်ကြည့်ခွင့်ပေးပါတယ် ။ မသိလို့ လိုက်မ၀င်ဘဲ အထဲသွင်းပြီးတာနဲ့ ထားခဲ့ရင်တော့ မီးစက်ထဲ မသွင်းခင် ချွတ်ယူချင်ယူမှာပေါ့နော်။ အထဲဝင်လိုက်သွားရင် မီးစက်ထဲထိုးသွင်းလောင်ကြွမ်းတဲ့ အထိ စောင့်ကြည့်လို့၇ပါတယ်။
အဲ စောင့်မကြည့်ဘဲ ပြန်ထွက်ရင်လည်း မီးစက်ပြန်ညီမ်းပြီး ပြန်ထုတ်ပြီး ယူချင်ယူမှာပေါ့ ။
ယူလည်း ယူပစေပေါ့ ။ အလကား မီးရိူ့ပြီးမှ ပြာတွေထဲက ပြန်စုယူနေရဦးမယ်။
ပေါင်းပြီးကျင်းထဲစုပုံမြုပ်တယ်ဆိုတာတော့ မသိဘူး ။
လျှပ်စစ်မီးနဲ့ရော ထင်းနဲ့ပါ လောင်စာ အားကောင်းကောင်း ရှို့ရင်တောင် လူတစ်ယောက် ပြာကျဖို့အတွက် ၄နာရီကျော်ကြာပါဒယ်…..
ရေဝေးက မီးသဂြိုလ်စက် အမှတ်(၁) ညာဘက်နံပါတ်(၃)အကန့်မှာ ၁သိန်းပေးပြီး အရိုးပြာ ကောက်နိူင်ပါတယ် အချိန်က ၁နာရီ ၄၀မိနစ်ကြာပါဒယ်……
၂၀၀၉ ခုနှစ် ကျုပ် ပါပါးကို သဂြိုလ်ဒဲ့ ကိုယ်တွေ့အရ
(စကားမစပ် မော်လမြိုင်ကလူဒွေ နောက်ပြောင်လေ့ရှိတယ် ပိန္ဒဲကုန်း အကင်ကောင်းဒယ်ဒဲ့ ပြီးတော့ ဈေးလဲကြီးဒယ်ဒဲ့)
ပေါင် ၂၀၀ လောက်ရှိတဲ့ ကျမလိုခန္ဓာကိုယ်မျိုးဆိုရင်တော့ တော်ရုံတန်ရုံ နည်းနဲ့လည်း မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး
ဒါကြောင့်မို့ စိတ်လျှော့လိုက်ပါပြီ။ ဒီဘ၀ တော့ ဒီမျှနဲ့ပဲ ရှိစေတော့လို့။